Soo-saaraha Caano-baxayaasha Kaarboonka Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Kunda
Saxanka birta kaarboon, xaashida birta kaarboon, birta gariiradda birta Kaarboon birta waa bir leh karboon ka kooban ilaa 2.1% miisaan ahaan. Qaboojiyaha qabow ee saxanka birta kaarboon ah ee ka hooseeya 0.2-3mm, dhumucda saxanka Kaarboonka oo dhumucdiisuna tahay 4mm ilaa 115mm
Saxanka birta kaarboon, xaashida birta kaarboon, gariiradda birta kaarboon
Birta kaarboonku waa bir leh kaarboon ka kooban illaa 2.1% miisaan ahaan. Qaboojiyaha qabow ee saxanka birta kaarboon ah ee ka hooseeya 0.2-3mm, dhumucda saxanka Kaarboonka oo dhumucdiisuna tahay 4mm ilaa 115mm
Waxaa loo adeegsaday qaab dhismeedka injineernimada iyo qeybaha caadiga ah ee farsamada, qaab dhismeedka dhismaha, birta qaabka, birta, iwm
Qalabka birta ah ee aan-daawaha ahayn ayaa loo isticmaalay in lagu sameeyo qaybo farsamo oo muhiim ah guud ahaan la isticmaalo ka dib daaweynta kuleylka,
Dhismooyinka injineernimada iyo qaybaha farsamada.
Middiyo, markab, konteenar, taangi iwm.
Saxanka birta guud ee birta
Saxanka birta daawaha ah ee hooseeya
Saxanka birta ee dhismaha sare
q235gjb 23 q235gjc 23 q235gjd 、 q235gje 3 q345gjb 、 q345gjc 3 q345gjd 、 q460gjc 4 q460gjd 4 q460gje
Saxan bir sare leh
Q390B 、 Q390C 、 Q390D 、 Q390e 、 Q420B 、 Q420C 、 Q420D 、 Q420e 、 Q460C 、 Q460D 、 Q460e 、 Q500C 、 Q500D 、 Q500e 、
Saxanka birta lagu raro
Saxanka birta u adkeysanaya heerkulka
Saxanka birta ee kululeeyaha
Saxan bir ah oo kaarboon tayo sare leh
Daawaha hoose ee saxanka xoogga sare leh
Q390 （B / C / D / E 、 4 Q420 (B / C / D / E） 4 Q460 （C / D / E 、 Q550 （C / D / E） 6 Q690 （B / C / D / E
Saxanka: 25/30/40/60 ect
Gariiradda: 4/6/10/12/18 ect
Gariiradda: loo habeeyay
1. Saxanka birta ah ee Daawaha
Codsiga: Nooca ugu horreeya ee birta qaabdhismeedka daawaha ah waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qaybo mashiinno kala duwan ah iyo qaybaha injineernimada. Birtani waxay leedahay qallafsanaan sax ah, sidaa darteed in badan oo iyaga ka mid ah ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo qaybo ka mid ah qalabka leh qaybo ballaadhan oo iskutallaab ah. Nooca labaad waa birta aaladda daawaha ah. Sida ka muuqata magaca, birta noocan ah waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo aaladaha qaarkood, sida qalabka cabbiraadda, wasakhda kulul iyo kuwa qabow, mindiyo, iwm. Birta noocan ah waxay leedahay iska caabin duug ah oo adag. . Nooca saddexaad waa bir wax qabad gaar ah leh, oo leh xoogaa khafiif ah myocardial, sidaa darteed walxaha la soo saaray waxay leeyihiin sifooyin gaar ah, sida birta kuleylka u adkaysata iyo birta u adkeysata dharka, taas oo la kulmi karta qaar ka mid ah shuruudaha gaarka ah ee wax soo saarka.
2. Saxan bir xoog leh
Codsiga: Bir adag oo badan ayaa leh codsiyo kala duwan. Mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan waa arjiga jirka gaariga. Si loo hagaajiyo tayada xamuulka qaada gawaarida, loo yareeyo qarashka wax soo saarka baabuurta, loona yareeyo isticmaalka shidaalka, taarikada birta oo aad u xoogan ayaa si isdaba joog ah loogu adeegsadaa wax soo saarka baabuurta gudaha iyo dibada. Inbadan, iyo habka wax soosaarka ee qaybaha jirku si aad ah ayuu isu beddelay marka loo eego geeddi-socodka wax-soo-saarka ballaaran ee asalka ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro qaybo qaabdhismeed sida alwaaxda gawaarida, dogobyada, fallaadhihii gudbinta iyo qaybaha gawaarida, taas oo yareyn karta culeyska qaybaha. Qiyaasta shaqada (ama adkaanshaha culeyska) heerka ayaa ka sarreeya taarikada birta caadiga ah waxayna soo nuugi kartaa tamar saameyn badan leh. Sidaa darteed, waxaa loo adeegsadaa xagga hore iyo gadaasha dambe ee hoosta hoose iyo qaybaha u baahan xoog iyo adkeysi sare si loo hagaajiyo amniga baabuurta. Waxaa loo adeegsaday qaybaha jirka ee jirka, marka lagu daro yareynta dhumucda qaybaha, qallafsanaanta dubitaanka dartiis, ka dib markii rinjiga la dubay, adkaanta dusha sare ee qaybaha waa la kordhin karaa, iyo waxqabadka anti-sag ee qaybaha dusha sare ayaa la hagaajiyo. Mashruucyada muhiimka ah ee qaranku waa inay naqshadeeyaan oo ay dabaqaan taarikada birta ah ee xoogga sare leh iyo daaro dhaadheer oo dhismeyaal sare leh, sida dhismayaasha barxadaha badda, goobaha Olimbikada, CCTV dhismayaasha cusub, Shanghai World Expo, biyo xireennada, saldhigyada korantada dhismayaasha kor u kac.
3 Codsiga saxanka birta ah ee badda
Ka ilaali qolofta qolofta inay ku xoqdo daxalka kiimikada biyaha badda, daxalka elektaroolka, noolaha badda iyo noolaha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro taarikada birta ah ee loogu talagalay qolalka badda iyo maraakiibta maraakiibta badda.
4 Codsiga sabuuradda
Waxaa loo adeegsadaa sidii weel cadaadis ah, walxaha saxanka weelashu waa inuu ka duwanaadaa iyadoo loo eegayo ujeeddada, heerkulka iyo u adkaysiga daxalka.
Inta badan waxaa loo isticmaalaa soo saarida batroolka, kiimikada, kala-soocidda gaaska, keydinta iyo haamaha gaadiidka ama qalab kale oo la mid ah, sida weelasha taayirka kala duwan, kuleyliyeyaasha kuleylka, haamaha keydinta iyo gawaarida taangiyada.
Waxaa si weyn loogu isticmaalaa batroolka, kiimikada, saldhigga korontada, kuleylka iyo warshadaha kale.
Waxaa loo adeegsaday in la sameeyo retaroorayaasha, kuleyliyeyaasha kuleylka, kala-saarayaasha, taangiyada wareega, saliida iyo taangiyada gaaska, taangiyada gaaska dareeraha ah, qolofka cadaadiska nukliyeerka, durbaanka kuleylka, saliida dareeraha iyo gaaska gaaska, tuubooyinka biyaha ee cadaadiska sare leh ee xarumaha tamarta korantada, qiyaasta marawaxadaha iyo qalabka kale iyo qaybaha.
Hore: Xidho saxanka birta adkaysi u leh
Xiga: Tuuboyinka ahama